Iphupha malunga neSifo seVenereal Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga neSifo seVenereal
Izifo zeVenereal zihanjiswa kuphela ngokwabelana ngesondo kwaye zinokwenzeka ebantwini nasezilwanyaneni. "Izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo" zibandakanya igcushuwa kunye ukuvuza ngaphantsi. Kude kube kutshanje ezi ziphantse zaphela. Kodwa kutshanje, inani leziganeko zezifo lenyukile kwakhona.
Kwindawo yezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo, usulelo lwe-HIV kunye noGawulayo, i-hepatitis B kunye ne-herpes yesini kubaluleke kakhulu ngeli xesha. Ukosulelwa ziintsholongwane ezithile ze-papilloma, ezinokubangela ukukhula komhlaza womlomo wesibeleko, nako kuyingxaki namhlanje.
Izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo, kwelinye icala, zihlala zikhankanywa ngesiJamani kunye nezifinyezo zesiNgesi, ezinje nge-STD (isifo esidluliselwa ngeentlobano zesini) okanye i-STI (izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini). Ezi zifo nazo, okanye ikakhulu, zidluliselwa ngokulalana. Unobangela wezi zifo unokuba ziintsholongwane, ibhaktiriya, ifungi okanye izinto ezinje. Ukusebenzisa iikhondom xa usabelana ngesondo kunceda ukuthintela usulelo.
Oko kuthethwa luphawu olungaqhelekanga "lwezifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini" ephupheni, sichaza kule tekisi ilandelayo:
1 Uphawu lwephupha «isifo esidluliselwa ngesondo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isifo esidluliselwa ngesondo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isifo esidluliselwa ngesondo» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «isifo esidluliselwa ngesondo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukulala malunga ne-STD kunokukuchaphazela ezinxulumene nomzimba Vumela isizathu sibuyele umva. Oku kuthetha ukuba iphupha ligula ngokwenene sisifo esidluliselwa ngeentlobano zesini okanye uyoyika ukuba naso. Ukujongana nalo mbandela kuthatha indawo yokulala kakhulu kwaye oku kubanika ukufikelela kwinqanaba lokulala.
Ukuba akukho sizathu sibonakalayo somfanekiso wephupha wesifo esidluliselwa ngeentlobano zesini, sinokuchazwa ngolu hlobo lulandelayo:
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi litolika uphawu lwephupha "isifo esidluliselwa ngeentlobano zesini" njengomqondiso ephupheni eliye lazi ukungcoliseka. Ingathi "ingcolile" ngaphakathi.
Nangona kunjalo, oku kufanelekile Ukungahlambuluki kwangaphakathi ayisiyonyani kwaphela nendawo yesini. Oku kunokuba ngumqondiso wendawo yeemvakalelo. Ke ngoko, kuyacetyiswa ukuba kulungiswe le meko yeemvakalelo kwaye kufumaneke unobangela "wongcoliseko."
Ukuba umntu woyika ephupheni lokosulelwa sisifo esidluliselwa ngeentlobano zesini ngexesha lokwabelana ngesondo nomntu othile, oku kungabonakalisa impembelelo enamandla kakhulu. Omnye uphenjelelwa kakubi ngabanye abantu kwi el mundo ukuvuka.
Ukuba umntu oleleyo uphupha ngokuba nesifo esinganyangekiyo ngenxa ye-HIV, ke ukungabi nathemba kuye kufanele okanye kufanele ukuba kunjalo Ukuziva unetyala Ziyaboniswa. Ukuba iqabane lakho linesifo esidluliselwa ngeentlobano zesini ephupheni, ngamanye amaxesha oku kunokubonisa ukungazithembi kubudlelwane bakho.
Uphawu lwephupha «isifo esidluliselwa ngesondo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika uphawu "isifo se-venereal" njengophawu lwe iinkumbulo ezibuhlunguKunzima, iingxaki okanye iimvakalelo. Oku kufuneka kungene ukusuka kwinqanaba lokungazi ukuya kwinqanaba lokuqonda ukuze umntu oleleyo akwazi ukuzilungisa.
Ukuba uyazivumela ukuba wosulelwe sisifo kumalungu esini esithandwa sakho ephupheni, oku kungabonisa ukuba umntu ochaphazelekayo usasokola neemvakalelo ngalo mntu.
Ukuba iphupha libetha omnye umntu ephupheni lakhe, kuba ibingumntu ophethe isifo esidluliselwa ngesondo, nguye. impembelelo embi Waye wazi lo mntu kwihlabathi elivukayo. Ukuthetha, "wosulelekile" ngalo mlinganiswa uthandekayo kwaye wamlingisa kakhulu.
Ukuba owasetyhini uphupha ngesifo esosulela ngokwabelana ngesondo ngexa lokukhulelwa, oku kungabonisa uloyiko loxinzelelo kunye noxinzelelo lokukhulelwa uqobo. Ukuba unengxaki yokuphuphuma kwesisu ephupheni ngenxa yeso sifo, woyika ukuphulukana nenxalenye yobuntu bakho.
Uphawu lwephupha «isifo esidluliselwa ngesondo» - ukutolika ngokomoya
Ngokwenkcazo yamaphupha okomoya, uphawu "isifo se-venereal" sinokufa Yintlungu umboniso wamaphupha ngaphambi kokudibana ngokomoya. Uyayoyika entsha kunye neziphumo ezinokuziswa yile manyano. Lowo uleleyo, ke, kufuneka alwele ngakumbi ukucaca ngokomoya.